Jizọs Egosi na Ofufe Chineke Na-anụ Ya Ọkụ n’Obi | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS EMEE KA ỤLỌ NSỌ DỊ ỌCHA
Mgbe e mechara agbamakwụkwọ ahụ e mere na Kena, Jizọs gawara Kapaniọm. Nne ya na ụmụnne ya ndị nwoke, bụ́ Jems, Josef, Saịmọn, na Judas, so ya gaa.
Ma, gịnị mere Jizọs ji gawa Kapaniọm? Obodo a adịghị ebe a na-achọ achọ, o bukwara ibu karịa Nazaret na Kena. Ọtụtụ n’ime ndị mbụ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs bi na Kapaniọm ma ọ bụ n’ebe dị ya nso. N’ihi ya, ọ dịịrị Jizọs mfe ịnọ n’obodo ha nye ha ọzụzụ.
Mgbe Jizọs nọ na Kapaniọm, ọ rụkwara ọtụtụ ọrụ ebube. N’ihi ya, ọtụtụ ndị nọ na Kapaniọm na n’obodo ndị gbara ya gburugburu nụrụ ihe ndị o mere na Kapaniọm. Ma, n’oge na-adịghị anya, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ ndị ji okpukpe ndị Juu kpọrọ ihe, ga-agawa Jeruselem ime Ememme Ngabiga nke afọ 30.
Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ n’ụlọ nsọ ahụ dị na Jeruselem, o mere ihe tụrụ ha n’anya nke ha na-ahụtụbeghị ụdị ya mbụ.
A gwara ụmụ Izrel n’Iwu Chineke ka ha jiri ụmụ anụmanụ na-achụ àjà n’ụlọ nsọ. Ndị si esi bịa Jeruselem ga-achọkwa ihe ha ga-eri. N’ihi ya, Iwu ahụ kwuru ka ndị si ebe dị anya bịa Jeruselem were ego ha ga-eji azụ “ehi, atụrụ, ewu” na ihe ndị ọzọ ga-adị ha mkpa n’oge ha ga-anọ na Jeruselem. (Diuterọnọmi 14:24-26) Ọ bụ ya mere ndị ahịa nọ na Jeruselem ji na-ere ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ụmụ nnụnụ n’ime ogige ụlọ nsọ ahụ. Ụfọdụ n’ime ha na-erekwa ihe ndị a oké ọnụ, si otú ahụ na-erigbu ndị ọzọ.
Ezigbo iwe were Jizọs, nke mere ka ọ kwafusịa mkpụrụ ego nke ndị na-agbanwe ego, kpuo tebụl ha ihu ma chụpụ ha ebe ahụ. Ọ gwara ha, sị: “Wepụsịanụ ihe ndị a n’ebe a! Kwụsịnụ ime ka ụlọ Nna m bụrụ ụlọ ahịa!”—Jọn 2:16.
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs hụrụ ihe a merenụ, ha chetara amụma e buru banyere Ọkpara Chineke. Amụma ahụ sịrị: “Ekworo maka ụlọ gị ga-eripịa m.” Ma, ndị Juu jụrụ ya, sị: “Olee ihe ịrịba ama ị ga-egosi anyị, ebe ọ bụ na ị na-eme ihe ndị a?” Jizọs zara ha, sị: “Kụtuonụ ụlọ nsọ a, n’ime ụbọchị atọ, m ga-ewu ya.”—Jọn 2:17-19; Abụ Ọma 69:9.
Ndị Juu ahụ chere na Jizọs na-ekwu banyere ụlọ nsọ ahụ ha nọ na ya. N’ihi ya, ha jụrụ ya, sị: “E ji afọ iri anọ na isii wuo ụlọ nsọ a, ị̀ ga-ewu ya n’ime ụbọchị atọ?” (Jọn 2:20) Ma, ụlọ nsọ Jizọs na-ekwu banyere ya bụ ahụ́ ya. Mgbe afọ atọ gachara, ndị na-eso ụzọ ya chetara okwu ndị ahụ mgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ.
Olee ebe ndị Jizọs gara mgbe e mechara agbamakwụkwọ ahụ e mere na Kena?
Olee ihe mere iwe ji wee Jizọs mgbe ọ hụrụ ihe a nọ na-eme n’ụlọ nsọ, gịnịkwa ka o mere?
Gịnị ka Jizọs bu n’uche mgbe ọ sịrị “ụlọ nsọ a,” gịnịkwa ka ihe ahụ o kwuru pụtara?
Ịlaịja Gbachiteere Ofufe Chineke
Olee otú anyị nwere ike isi ṅomie Ịlaịja mgbe anyị na ndị na-ekweghị n’ihe Baịbụl kwuru na-ekwurịta okwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Egosi na Ofufe Chineke Na-anụ Ya Ọkụ n’Obi
jy isi 16 p. 42-43
Jizọs Achụpụ Ndị Na-azụ Ahịa n’Ụlọ Nsọ
Mee Ka A Mata Onye Bụ́ Ezi Chineke!